Akụkọ - you maara mmepe nke ekwentị mkpanaaka? Ọ gbanwere ndụ anyị n'ezie
You maara mmepe nke ekwentị mkpanaaka? Ọ gbanwere ndụ anyị n'ezie
N'ikwu okwu banyere ngwaahịa a, ụfọdụ ndị mmadụ ga-ahụrịrị ya. N'ezie, n'ikwu okwu, a gaghị akpọ ngwaahịa a ekwentị mkpanaaka. Akụrụngwa a pụtara na narị afọ nke 20, mgbe Shanghai bụ obodo mbụ mepere ọdụ paging. Mgbe nke ahụ gasịrị, ngwa BP batara na ahịa ndị China. Banyere ọrụ nke ngwaọrụ a, ụfọdụ ọgbọ post-80s ejirila ya mara na mgbe ịchọrọ ka ndị enyi gị ma ọ bụ ndị ahịa kpọtụrụ gị, ị ga-agwa ha nọmba paging gị tupu oge eruo. Mgbe ahụ ha chọrọ ịkpọtụrụ gị, ha ga-ahụ ebe a na-edebe akwụkwọ ozi gwa gị n’elu ikpo okwu a. N'ikpeazụ, ikpo okwu ga-agwa gị, yabụ ị natara ya Nweta ozi a na-akpọ ka ị nwee ike ịnweta ụlọ ekwentị dị nso iji kpọghachi. Site na ilele usoro a, anyi puru ima na nkwurita okwu n’oge ahu adighi nma, ma o nweghi ike iru oru n’oge.
N’ikwu okwu banyere ụdị ekwentị a, ọ dị ntakịrị ntakịrị na ndụ anyị nke oge a. Emepụtara ngwaahịa a Motorola na 1973. Ọdịdị nke ekwe ntị na-egosi na ndị mmadụ n’ekwentị n’ekwentị. Na ngwaahịa a, enwere ihuenyo LCD na otu bọtịnụ. Na echiche anyị, enwere ike ngwaahịa a naanị ịkpọ ekwentị. N'ezie, ọ nwere ọtụtụ ọrụ, dị ka igwu egwuregwu, ndekọ na MP3.
Igwe a pụtara na mba ofesi, ya na mgbanwe nke ụwa, mba anyị bidokwara iwebata ngwaahịa a. Na 1987, Guangdong butere ụzọ iji mechie njikọ nkwukọrịta. Mgbe ọdịdị ngwaahịa a gosipụtara na ala, ndị mmadụ amaara ya nke ọma. Agbanyeghị, n'ihi oke ọnụ ahịa n'oge ahụ, ndị mmadụ chere na ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere ụdị igwe a, ọ ga-abụ onye ọchịchị aka ike nke obodo n'echiche anyị ugbu a. Ka oge na-aga, ka oge na-aga, ngwaahịa ọhụrụ malitere ịpụta. N’afọ 2001, ekwentị kpochapụrụ site n’oge, nke ghọrọ okwu mere eme n’ezie.
Ọbịbịa nke ekwentị ekwentị 2G Era
Site na mmelite na-aga n'ihu nke teknụzụ, ngwaahịa ekwentị mkpanaaka apụtawo na ndụ anyị. Ọ bụ ezie na ekwentị gara aga nwere nnukwu ihe dị mkpa maka ekwentị mkpanaaka, olu ya buru oke ibu ma ọ naghị adaba adaba iji buru. Ya mere, ndị mmadụ mepụtara obere na obere ekwentị. Na mgbakwunye, n'ihe banyere teknụzụ nkwukọrịta, ndị mmadụ ekepụtala teknụzụ 2G. Kinddị ekwentị a nke nwere ike ijikọ na 2G network nwere ike itinye ụfọdụ ọrụ na-adịbughị site na iji netwọkụ a, dị ka inwe ike izipu ndị ọzọ ozi ịntanetị na ngwanrọ. Maka ụdị ekwentị a, e nwekwara ụfọdụ ụdị ama ama, dịka Nokia, nke na-enye anyị echiche miri emi. Ọ kacha ewu ewu n’oge ahụ, nihi na ekwentị ya dị mma nke na ọ bụrụgodị na ọ daa n’ala, ọ ka ga-adị ire.
Ka anyị kwuo maka ụdị ọdịdị nke ụdị ekwentị a. Na usoro nke ọdịdị, e nwere ọtụtụ ụdị aghụghọ. Dịka ọmụmaatụ, enwere ndị na-adọta, na e nwekwara ọtụtụ ụdị ha, dị ka flip-flop, flip-flop, na ugbu a nnukwu ụdị ihuenyo, nke dị iche iche maka ndị mmadụ ịhọrọ.
Amamihe na ike bia
Site na agam n’ihu nke teknụzụ anyị, tupu mmadụ ekepụta 2G network enwekwaghị ike inweta ihe ndị mmadụ chọrọ. N'ihi nke a, 3G na netwọkụ nkwukọrịta 4G apụtawo. Na ntoputa nke netwoki ndia, ndi mmadu emebela igwe ekwenti ha na oru ha. Nke ahụ bụ ihe anyị na-eji ugbu a. Kinddị ekwentị a nwere ngwa ndị ọzọ, dịka ige egwu na ikiri vidio.
Post oge: Ọgọstụ-18-2020